काठमाडौं अब धुवाँ र धुलो मुक्त:पाँचवटा रुटमा ब्रुमर सञ्चालन,कुन-कुन हुन रुट ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगपालिकाले धुलो नियन्त्रण गर्नका लागी बुधबारदेखि पाँचवटा रुटमा ब्रुमर सञ्चालन गर्ने भएको छ । आधुनिक प्रबिधियूक्त ब्रुमरबाट काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सड्क धुलो मुक्त बनाइने भएको हो । मंगलबार एक कार्यक्रमका बिच शुभारम्भ गरिएको हो ।
महानगरपालिकाले स्वच्छ र सफा शहरको योजनावद्ध विकासका र विस्तार गर्नका लागी ब्रुमरको माध्यमबाट बुधबारदेखि सडक सफा गर्न लागिएको बताएको छ । महानगरले धुवा र धुलो मुक्त शहर निर्माण गर्नको लागी पाँचवटा फरक-फरक रुटमा ब्रुमर सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
टेकुबाट छुट्ने पाँचवटा ब्रुमर फरक फरक रुटमा सडक बढार्दै अघि बढ्नेछन् ।पहिलो रुट टेकुबाट सुरु भई सोल्टीमोड हुँदै कल‌ंकी फेरि सोल्टीमोड, टेकु, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, नयाँ सडक, जुद्धशालिक, महांकाल, जमल, लाजिम्पाट, शितल निवास, शिक्षण अस्पताल, नारायणगोपाल चोकसम्मको मूल सडकसम्म पुग्नेछ । त्यसपछि फर्केर जमल, विश्वज्योति, घण्टाघर, भद्रकाली, शहीदगेट हुँदै सुन्धारासम्मको सडक बढार्नेछ ।
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा चर्चित कार्यक्रम’सिधा कुरा जनतासँग’ भव्यताका साथ सम्पन्न ! (भिडियो सहित )
अमृत शर्मा सिड्नी अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग भव्यताका साथ […]